Nonogram (oo loo yaqaan adduunka oo dhan magacyo kala duwan) waa cayaaro ku salaysan koodhka sharaxaadda - oo la xidhiidha isku xigta iyo tiirka miiska - kaas oo qeexaya dhererka koox kasta oo ka mid ah god buluug ah oo isku xiga ee khadkaas. Tababarkan Nonograms wuxuu kaa caawinayaa inaad ku tababarto xalinta ciyaarta hal saf oo ku salaysan koodhkan sharaxaadda.
Waayo, code kasta siiyey, sumadda sida god meesha aad hubaal ah oo ku saabsan qiimaha (buluug ama madhan). Ka tag su'aalaha-calaamadaha ku yaal meelo aanad haysan macluumaad ku filan si aad u gaarto go'aan.
Si aad u bilowdo, dooro nooca kedis gaar ah.
laba jibbaaran aan la hubin
iyada oo ku saleysan xeerka qeexitaanka, waa in la buuxiyaa
iyada oo ku saleysan xeerka qeexitaanka, wareega waa inuu ahaadaa mid madhan
Jooji tutorial, ciyaaro ciyaarta